Ithonya lobuhlobo nabazali ekukhuliseni izingane zabo
Ukukhushulwa kwezingane, njengenkinga ephuthumayo kakhulu futhi ebalulekile, kunikezwe ukunakwa okukhethekile kuzo zonke izikhathi emhlabeni jikelele. Ukubaluleka kwalo kuye kwaqashelwa njalo, izinkulungwane eziningi zemisebenzi eyenziwa ngabachwepheshe abavela emasimini ahlukene - kusukela ochwepheshe bezengqondo kuya kubadlali - banikele kulo. Ngempela, isihloko sinobuciko obukhulu futhi esingenamkhawulo, njengezombusazwe. Emva kwakho konke, ikakhulukazi ukuthi isizukulwane esilandelayo sizokhula kanjani, kuxhomeke nokuthi umphakathi uzoqhubeka kanjani uphile futhi uthuthuke.
Ayikho imodeli evamile, engavumelekile yokukhulisa futhi, cishe, ngeke ibe khona. Kusobala ukuthi emazweni ahlukene izindlela ezehlukene zemfundo emakhulwini eminyaka ahlukene ayenziwe - kuwanele ukuqhathanisa ngalokhu kuhloniphekile iSparta neJapan Yasekuqaleni ukuze kuqondwe ngendlela ehlukile. Ukufana kufakwe kuphela ekuqondisweni okuyinhloko - ukuziphatha. Futhi lokhu ikakhulukazi ngenxa yokuthi kuze kube sekhulwini lama-20, ukuqondiswa okuyinhloko kwabafundisi babo basebenze inkolo. Uphinde wabusa umndeni, ngakho-ke wawukhona lapha, kusukela ekuzalweni kwengane, isisekelo semfundo safakwa.
Yiqiniso, umehluko ezindleleni zemfundo kwachazwa ubulili - abafana namantombazane bakhuliswa ngezindlela ezahlukene, ngisho naseMideni Ephakathi. Kodwa, naphezu kokuthi abafana abangaphambi kweminyaka engama-7 bekhuliswe ngabomama kanye namannies, babengazi kahle ukuthi kufanele abe ngubani. Emindenini yanamuhla, ngezinye izikhathi ezimbalwa, ukukhuliswa kwezingane futhi ikakhulukazi ilele emahlombe omama. Ngakho-ke, kuncike ezimfanelweni zakhe zomuntu, umbono, uthando, ukholo kanye nomthwalo wemfanelo okuxhomeke kunjani uhlobo lwabantu indodana yakhe noma indodakazi yakhe eyokhula, inzuzo noma ukulimala kuyoletha, ngubani oyovuswa futhi akhuliswe. Kuhle, uma ingane ezalwa emndenini ifisa, ubuhlobo bomndeni buyomusa, futhi umama unothando futhi unethenda: kulokhu kumuntu kunamathuba okukhula umuntu ophawulekayo. Futhi uma "enenhlanhla" ukuba azalwe emndenini lapho ubuhlobo phakathi kwabazali akusezingeni eliphakeme kakhulu. Ithonya lobuhlobo nabazali ekukhuliseni izingane zabo linomphumela omkhulu kakhulu.
Amadoda ahlanganyela kakhulu ebuhlotsheni bomndeni. Ngeshwa, zibandakanya kokubili ngokuqondile nangokungaqondile - emva kwakho konke, ubudlelwane obubi emndenini akuyona into kuphela kodwa ukusabela kokuphelelwa yithemba, lapho izinkinga zomndeni, ukukhathazeka, izindaba, umsebenzi, nesikole, nokukhulelwa kuwela kowesifazane. Uma udinga ukwenza konke, buyisa, uzuze, uthenge, upheke, uma kungekho muntu osizayo futhi ungazethemba kuphela. Kodwa amandla awanamkhawulo, ukuphenduka kuyeza, zombili izinzwa futhi uzoqala ukuhluleka. Futhi ukuze uthole umzimba ngaphandle kwalesi sigqila, intukuthelo iyasiza.
Wonke umuntu uyazi ukuthi "inzondo ingashisa ngaphezu kokuthanda." Kunjengokukunika umoya wesibili, uzizwa unamandla, unesihawu, unesihluku, wenza indlela yakho, ungabaleki nanoma ubani. Kodwa njengoba wonke umuntu eyazi kahle ukuthi lesi simo sinengozi kowesifazane ngokwabo futhi kuyingozi emndenini wakhe. Ukuhlukumezeka kubangela kuphela ukuhlukunyezwa okuqhubekayo, insimu yolwazi yezwe lethu iqoqa futhi ibuyele "kumlobi" kwinombolo enkulu kakhulu. Futhi, ngakho-ke, kuthatha amandla amaningi nokufutheka ukulwa futhi, ukunqoba ... Futhi le ndlela ivaliwe. Kwaqala futhi kuncishiswa kumbuthano we-bitch ngokwawo, ujeziswa engxenyeni engapheli, engapheli, engapheliyo.
Futhi ngaphezu kwakho konke, ukuthi naye kulo mbuthano, ukuvuthwa kwemizwelo emibi ephuma ezweni, ukulwa njalo nokuthukuthela kuphoqeleka ukuba kungaboni "iziboshwa" - izihlobo zakhe, indoda, izingane. Kuyamanga yini ukuthi ukuxabana komndeni kwaqhamuka, futhi indodana nendodakazi baqala ukukopisha ukuziphatha komama? Phela, indlela eyinhloko yemfundo yisibonelo esiphilayo. Kungakhathaliseki ukuthi isifiso sabazali siphila, izingane ziyaziqaphela ngokungazi noma ngokungazi ukuthi zikhuluma kanjani, ubudlelwane, ukuphendula kanye nokuziphatha. Futhi-ke, uma umama engafuni ngokungazelelwe ukuthi izingane zakhe aziguquki kangcono, akekho ozokhubeka: lokhu kuyisibonelo sakhe sokuziphatha.
Yileyo ndlela inhlanzi iba ngayo ngokwengeziwe, futhi, ngeshwa, lokhu akusekumangazi, njengokungathi "isimiso" esisha sokuphila. Ngakho-ke yini esizoyilindela esikhathini esizayo - i-bitch yomphakathi?
Ngifuna ukukholelwa ukuthi cha. Ngenhlanhla, abesifazane abaningi abahambisana nale ncazelo banothando olujulile nokubekezela izingane zabo. Isimo singcono nakakhulu uma kukhona umuntu omsizayo kulokhu. Ngemuva kwalokho, kungakhathaliseki ukuthi kwakunjani, futhi umzali kufanele akhulise abantwana, hhayi umama oyedwa, ngisho noma enhle. Okokuqala, ngoba inqubo yemfundo iyaqhubeka, ayikwazi ukuhlanganyela ngesikhathi sabo sokuphumula kuphela. Futhi okwesibili, noma ngubani ozosho ukuthi umfana udinga uyise - futhi njengesibonelo sokuziphatha, futhi njengomngane, njengomsizi, futhi njengomeluleki. Kungenxa yamahlombe kayise ukuthi umthwalo oyinhloko ubeka phezu kwemfundo yendodana yakhe. Emndenini lapho ngesizathu esithile kunomama kuphela, esinye sezihlobo singakwazi futhi sifanele sithathe esikhundleni sikababa, ngoba umnikelo wesilisa ekukhuliseni umfana ngeke uphinde ugcwaliswe ngenye indlela, kungakhathaliseki ukuthi owesifazane uzama kangakanani.
Yiqiniso, ngenxa yendodakazi, ubaba kufanele abe imodeli yamadoda, ukusekelwa nokuvikelwa, ngakho-ke akekho owamkhulula ekufundiseni intombazane. Kukhona nesidingo sesivumelwano jikelele kanye nokuhlanganyela. Ngakho-ke, noma ngabe abazali bangaphandle komndeni, kufanele balethe ekhaya ukukhanya nokufudumala, okuhle nenjabulo, iqhaza eliqotho nothando. Isibonelo sobuhlobo phakathi kwabazali yinto yokuqala izingane ezithathayo, futhi ukuhlonipha, ukusizana nokusekela, ukuziphatha okuhle nothando kusemndenini kuzomenza umuntu ahambelane nomuntu.
Okubili kokubili: izitsha ezintathu ezinhle futhi ezinempilo ingane
Ingane kanye nolwandle: imithetho engu-3 yokunciphisa izingane
Ukuphothula iziqu ebangeni lesi-4: izimfihlo zenhlangano
Izigcawu ezithandekayo ngo-Mashi 8 - zesikole ne-enkulisa - ezincane, izingane zesikole samabanga aphansi kanye nabafundi besikole esiphakeme - Izibonelo zezigcawu ezihlekisayo nezihlekisa ngo-Mashi 8 kumama
Izingane ezinezinwele: izinkinga, ukucinga izindlela zezemfundo nokuqeqesha
Esihloko sesikole: ukukhuthaza ingane ukuba ifunde kahle
Ukubamba iqhaza kukababa ekukhuliseni ingane
Ingabe kufanelekile ukukholelwa emandleni angaphezu kwemvelo?
Kusho ukuthini ukuba umama omuhle?
Iphi iholidi elihle kakhulu e-Italy nezingane?
U-Jolie no-Pitt bafunda isigaba somnotho
Indlela yokuthola isitayela sakho
Ukusebenza kwi-Internet kuyiqiniso noma i-utopia?
I-Horoscope ye-Capricorn-amadoda ngo-2016 - uthando nangonyaka wokuzalwa